सडकका खाल्डा पुर्न नसक्ने, अनि सपना चाहिँ रेल ? -
[ November 16, 2018 ] बिहानै भगवानको दर्शन गरि रशिफल हेर्नुस आफ्नो कामको थालनी गर्नुस	समाचार
[ November 14, 2018 ] भगवानको दर्शन गरि भेटि स्वरूप एक शेयर गरि २०७५ कार्तिक २९ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुस !!	समाचार
[ November 14, 2018 ] भाइरल जोडी: बखत बिष्टलाई प्रतिभाले सुटकेसमा राखेर खाजाघर लिन गएपछि… (भिडियो सहित)	समाचार
[ November 14, 2018 ] सवारी लाइसेन्सको आवेदन मंसिरबाट खुल्दै, शेयर गरि जानकारी गरौ !!	समाचार
[ November 14, 2018 ] अस्ट्रेलिया जान किनमेल गरि फर्केका सुदिप एकाएक बेपत्ता, परिवारले रुवाबासी गर्दै खोजिदिन आग्रह गरे	समाचार
Homeराजनीतिसडकका खाल्डा पुर्न नसक्ने, अनि सपना चाहिँ रेल ?
सडकका खाल्डा पुर्न नसक्ने, अनि सपना चाहिँ रेल ?
April 24, 2018 Spnews राजनीति, रोचक / विचित्र 0
अहिले हाम्रा भइरहेका सडकहरु नै खाल्डाखुल्डीले निकै नराम्रा बनेका छन् । त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको सडक हो । भएकै सडकका खाल्डा पुर्न नसक्दासम्म रेलको सपना बाँड्नु न्यायोचिन होइन ।
अहिले रेल हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन । बरु देशभर सडक सन्जाल विस्तार गर्नुपर्छ । अझै पनि हाम्रा गाउँहरु सडक सन्जालको पहुँचबाहिर छन् । गाउँबाट सहरसम्म आउन पैदल हिँड्नु पर्ने बाध्यता उस्तै छ । वर्षौदेखि योजना बने पनि काठमाडौंमै बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न सकेका छैनौँ ।
पहिले सबैतिर सडक सन्जाल पुगोस् अनि बल्ल रेलको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले पनि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको सडक हो, त्यसपछि मात्र रेल ।
अहिले रेल आए हाम्रो उत्पादन भारत–चीन पुग्छ भनिएको छ । तर, पहिले हामीले सोच्नु पर्ने हो– हाम्रा उत्पादन के–के छन् त ? भारत र चीन दुवै देशबाट आउने रेलले काठमाडौंलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने भनिएको छ । तर, सोच्नु पर्ने विषय हो– काठमाडौंमा के उत्पादन हुन्छ ?
अर्कोतिर रेलमार्गले छुने स्थानहरुमा सडकमार्ग पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण विषय हो । त्यस्तो भए र उत्पादन भए न हामीले रेलमा सामान लैजान सक्छौँ । हामीले कृषिमा राम्रो गर्यौ र हाम्रा हस्तकलाका सामग्री पनि सहजरुपमा भारत पठाउने हो भने पनि सडक सन्जाल फैलिनु पर्छ । देशका हरेक ठाउँमा उत्पादन भएका वस्तुहरु राजधानीसम्म सहज रुपमा आउनु पर्छ ।
यसको अर्थ रेल बन्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन । तर, अहिले नै रेलका लागि अर्बौं रकम खर्च गर्नु मुर्खतावाहेक केही होइन ।
भारत र चीनको बजारलाई एकपटक हामीले हेर्न सक्यौँ र त्यसअनुरुप उत्पादन गर्न सकेमात्र रेलले फाइदा हुन्छ । अन्यथा रेलले फाइदा हुँदैन, ठूलो नोक्सान पुर्याउनेछ ।
नोक्सान किन पनि भने भारतीय लगानीका धेरै उद्योग अहिले पनि चीनमा छन् । अनि चिनियाँ लगानीका धेरै उद्योग भारतमा छन् । भारत–चीन एकअर्काका ठूला व्यापारिक साझेदार हुन् । अहिले हामीले रेल बनायौँ भने उनीहरुका उत्पादन ओसारपसार गर्ने मार्गका रुपमा नेपाल प्रयोग हुनसक्छ ।
यसको अर्थ हो हामी प्लेटफर्ममात्र बन्ने छौँ– भारतीय रेलले ल्याएको सामग्री चिनियाँ रेलमा र चिनियाँ रेलले ल्याएको भारतीय सामग्री भारतीय रेलमा लोडअनलोड गर्ने ठाउँ । अहिले भारत र चीन नेपालमा किन रेल चाहन्छन् भने उनीहरुको सामान ओसारपसार गर्न हाम्रो देशको मार्ग प्रयोग गर्न पाइन्छ र व्यापारका लागि रेल सस्तो माध्यम हो ।
यसरी हाम्रो मार्गबाट गुड्ने रेलबाट हामीले पनि फाइदा त लिन सक्छौँ । तर, त्यसका लािग हामीले तयारी र अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । तिनै रेलमा हामीले चिनियाँ र भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सक्छौँ । तर, त्योभन्दा पहिले नेपालका पर्यटकीय स्थलको प्रचार गर्नुपर्छ । रेलमा पर्यटक आइसकेपछि उसलाई अर्को ठाउँमा जान सडक या हवाई मार्ग चाहिन्छ । त्यसको विकास हामीले गर्नुपर्छ ।
एउटा उदाहरणमा तिब्बतलाई नै लिऔँ । तिब्बतमा मासुको माग अत्यन्त धेरै छ । हामी त्यो माग पुरा गर्न सक्छौँ त ? चीन सरकारसँग कुरा गरेर हामीले केही विशेष वस्तु नेपालबाट मात्रै निर्यात गर्ने सम्झौता गर्न सक्छौँ ? तर, माग पुरा गर्नका लागि नै पहाड, वन जंगल तथा नदीनाला अत्यधिक दोहन गर्न चाहिँ दिनु हुँदैन ।
अर्कोतिर भारतमा अदुवालगायत केही कृषि उपजको माग पनि बढ्दो छ । यी मागहरु पूरा गर्न पहिले हामीले कृषि उपज बढाउनु पर्छ । अनि ती मुलुकहरुमा सहज व्यापार गर्न सम्झौता गर्नुपर्छ ।
सचेत के कुरामा पनि हुनुपर्छ भने रेल मार्गमा हाम्रा पहाड, वन तथा निकुन्जहरुमा पनि नराम्रो असर पर्न सक्छ । तीव्र गतिमा सन्चालन हुने रेलले पर्यावरणीय कस्ता असर गर्छन् भन्ने पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले पनि भारत र चीनका विभिन्न नाकाहरुबाट तस्करी भइरहेको समाचार आइरहेका हुन्छन् । रेलमार्ग हुँदा यस्ता गतिविधि बढ्ने सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ । त्यसैले पनि रेलमार्गबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
हो, अहिले सरकारले रेलको सपना त देखाइरहेको छ । तर, कस्तो रेल, कसरी बनाउने, कसरी सन्चालन गर्ने भन्ने कुनै स्पष्टता छैन । बरु सरकारले राष्ट्रवादको पक्षपोषण गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमै रेल कम्पनी स्थापना गरेर भारत र चीन सरकारलाई वा त्यहाँका नीजि कम्पनीलाई रेलवेमा लगानी गर्न लगाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ ।
यसले रेलको स्वामित्व नेपालमै रहने देखाउँछ । भारत–चीनले नै स्वामित्व लिने गरि रेल निर्माण गर्ने हो भने त झन् विवादास्पद हुनसक्छ । सबैभन्दा ठूलो डर भनेको हामी भारत र चीनको बजार मात्र बनेर सकिन्छौँ कि भन्ने हो । बेलैमा सोचिएन भने खाडीमा पसिना बगाएको पैसाले भारतीय र चिनियाँ सामग्री मात्र किनेर बस्नु पर्ने अवस्था आउला कि भन्ने हो ।
हो, व्यापारका लागि सबैभन्दा सस्तो माध्यममध्ये रेल एउटा हो । तर, रेल अहिले नेपालको आवश्यकता होइन, भविष्यमा चाहिँ चाहिन्छ । हामीले पहिले हाम्रा उद्योगको क्षमता विकास गर्नुपर्छ, र उताबाट आउने रेललाई यताबाट सामान पठाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले अहिले रेलबारे होइन, हामीले रेलको स्वामित्व र हाम्रा उत्पादन क्षमताबारे गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ ।
(थापा पूर्वाधार विज्ञ हुन् ।)
अनि सपना चाहिँ रेल ?
सडकका खाल्डा पुर्न नसक्ने
लोकतन्त्र दिवसको १२ वर्ष: जनताले के पायो, के पाएन ? (भिडियो रिपोर्ट)
घुम्टो खोलेर नेपाल आइडलमा
बिहानै भगवानको दर्शन गरि रशिफल हेर्नुस आफ्नो कामको थालनी गर्नुस
भगवानको दर्शन गरि भेटि स्वरूप एक शेयर गरि २०७५ कार्तिक २९ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुस !!
भाइरल जोडी: बखत बिष्टलाई प्रतिभाले सुटकेसमा राखेर खाजाघर लिन गएपछि… (भिडियो सहित)
सवारी लाइसेन्सको आवेदन मंसिरबाट खुल्दै, शेयर गरि जानकारी गरौ !!
अस्ट्रेलिया जान किनमेल गरि फर्केका सुदिप एकाएक बेपत्ता, परिवारले रुवाबासी गर्दै खोजिदिन आग्रह गरे
किन जादैछिन राष्ट्रपति भण्डारी पोल्याण्ड ?
नेपालकाे पहिलो महिला एआइजी डा. दुर्गा थापालाई बधाई
दुई हजारभन्दा बढी अधिकृतको आवेदन खुल्दै
बिहानै भगवानको दर्शन गरि राशिफल हेर्नुस कामको थालनी गर्नुस सफलता मिल्नेछ
जमराको जुसले थुप्रै बिरामी सहिद हुनेवाला छन्, कलेजोका रोगीका लागि जमराको जुस विष नै हो
आइतबार आजका कार्टुन आजको राशिफल - वि.सं. २०७४ कार्तिक ०२ गते बिहीबार आजको राशिफल / वि.सं. २०७४ फाल्गुन ०३ गते बिहीबार आजको राशिफल / २०७४ कार्तिक ०१ गते बुधबार आजको राशिफल – वि.सं. २०७४ आश्विन ०१ गते आइतबार आजको राशिफल – वि.सं. २०७४ भाद्र ०२ गते शुक्रबार आजको राशिफल – वि.सं. २०७४ श्रावण ०३ गते मङ्गलबार कालिन्चोक भगवतीले सबैको रक्षा गरुन: हेर्नुस आजको राशिफल भदौ ११ गते तपाइको आजको दिन कस्तो हुनेछ हेर्नुस राशिफल / वि.सं. २०७४ चैत्र ०५ गते सोमबार तपाईको आजको दिन कस्तो हुनेछ हेर्नुस राशिफल / वि.सं. २०७४ चैत्र ०६ गते मङ्गलबार तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल : असार ११ गते तपाईको राशिफल / वि.सं. २०७४ माघ १४ गते आइतबारको दिन कस्तो रहनेछ हेर्नुस बिहानै भगवानको दर्शन गरि राशिफल हेर्नुस अनि आफ्नो कामको थालनी गर्नुस बिहीबार बुधबार मंगलबार यस्तो छ कारण लाइभ हेर्न यहाँ थिच्नुस शनिबार शुक्रबार श्री स्वस्थानी ब्रत कथा भाग: २ तपाईं पनि सुन्नुहोस र अरुलाई पनि सुनाउनुहोस सोमबार स्थानीय त्रसित ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ ! ग्राहकको घुइचो
Sudanbahadurkhusha: आंगकाजी के भन्दै छ ? किन भन्दै छ ? विषय प्रवेशै नगरी पागलझैँ हुल बर्बरायर भिड़…
Jeevan bk: हैन म दंग पर्छु एकदिन रेणुले फोहोर टिपेर भरतपुर सफा हुन्छ? अनि पत्रकार फोटो छाप्न मौका पाएकोमा खुसी र जनता…
Lil Narayan Shrestha: hello sir plz contact me I have old money which you want…9821835800/9846351141